Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ: Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Onyinye wardgwọ Ọrụ bụ ọrụ ebere na-asụ ụzọ nke na-ele sayensị n'azụ mmekọahụ na mmekọrịta ịhụnanya. Usoro ụgwọ ọrụ nke ụbụrụ ghọrọ usoro iji mee ka anyị nweta ụgwọ ọrụ nkịtị dị ka nri, njikọta na mmekọahụ iji kwalite ndụ anyị.
Taa, teknụzụ ịntanetị ewepụtala ụdị 'supernormal' nke ụgwọ ọrụ ahụ n'ụdị nri nri, mgbasa ozi na ịntanetị. Ha na-elekwasị anya ma na-emebiga ihe ụbụrụ kachasị ụbụrụ anyị mma, usoro ụgwọ ọrụ. Mfe ịnweta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị site na teknụzụ ekwentị na-abawanye ihe ize ndụ nke nsogbu site na ịba ụba. Echiche anyị amalitebeghị ịnagide mkpali mmụọ dị otú ahụ. Society na-enwe ntiwapụ nke nsogbu omume na ahụ riri ahụ n'ihi nsonaazụ.
Na Onyinye wardgwọ Ọrụ anyị na-elekwasị anya na ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị ga-achọ ilekwasị anya na mmekọrịta ịhụnanya dị mma, ọ gaghị ekwe omume ịme ya na-ekwughị ọrụ nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ taa. Anyị na-ele mmetụta ya na ahụike na ahụike, mmekọrịta, nnweta na mpụ. Ebumnuche anyị ime ka ndị na-abụghị ndị ọkà mmụta sayensị nweta nyocha na-akwado ka mmadụ niile nwee ike ịme nhọrọ dị iche iche gbasara ịntanetị.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike ịbụ ihe na-adịghị njọ nye ụfọdụ, ịgbasa na awa elere anya na ụdị ndị a na-ele anya nwere ike iduga nsogbu ndị a na-atụghị anya na mmekọrịta ndị mmadụ, ọrụ, na ọrụ ahụike maka ndị ọzọ. Ọ nwere ike iduga oge n'ụlọ mkpọrọ, idebe igbu onwe onye na ọtụtụ nsogbu ahụ ike. Anyị chere na ị nwere ike ịmasị ịmụta banyere ahụmịhe ndụ nke ndị kwuworo uru bara uru site na ịkwụsị ịkụ egwu porn na-ata ahụhụ dị njọ site na oge ịṅụbiga ihe ókè. Ọrụ anyị dabeere na nchọpụta agụmakwụkwọ na ihe ndị a dị ndụ n'ezie. Anyị na-enye nduzi maka mgbochi na ịme ụlọ nrụgide na ahụ riri ahụ.
E debara anyị aha dị ka Scottish Charitable Incorporated Organization SC044948, tọrọ ntọala na 23 June 2014.
Ịkwalite mmụta site na ịkwado nghọta ọha na eze maka nhazi ụtụ ọrụ nke ụbụrụ na otú o si emekọrịta na gburugburu ebe obibi, na
Iji mee ka ahụike dịkwuo mma site n'inwe nghọta n'ihu ọha banyere mgbidi ụlọ na nrụgide.
A na-edebanye nkọwa zuru ezu nke Ụlọ Ọrụ Ụgwọ Ọrụ na Office nke Charish Regulator na ndị dị na ya OSCR website. Nloghachi anyị kwa afọ, nke a makwaara dị ka Akụkọ Kwa Afọ, dịkwa site na OSCR na ibe ahụ.
Nke a bụ otu onye ndú anyị ugbu a.
Mary Sharpe, Advocate, abụwo onye isi anyị ebe ọ bụ na March 2021. Kemgbe ọ bụ nwata, ike nke uche masịrị Mary. Ọ na-akpọ ahụmịhe ọkachamara ọkachamara ya, ọzụzụ na agụmakwụkwọ iji nyere The Reward Foundation aka idozi ezigbo okwu banyere ịhụnanya, mmekọahụ na Intanet. Maka ozi ndị ọzọ na Mary pịa Ebe a.
Ndị òtù Board gụnyere…
Dr Darryl Mead bụ oche nke Foundationgwọ Ọrụ .gwọ. Darryl bụ ọkachamara na ịntanetị na afọ ọmụma. O guzobere ụlọ ọrụ ịntanetị ọha na eze na-akwụghị ụgwọ na Scotland na 1996 ma nye ndị gọọmentị Scottish na UK ndụmọdụ banyere ihe ịma aka nke mgbanwe anyị gaa na ọha mmadụ. Darryl bu onye otu ndi Chartered Institute of Library na ndi okacha amara nke ozi.
Anne Darling bụ onye na-enye ọzụzụ na onye na-elekọta ọrụ. Ọ na-enye ọzụzụ ọzụzụ ụmụaka na ọkwa niile na ndị ọrụ agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ onwe ha. Ọ na-enyekwa ndị nne na nna ohere n'akụkụ niile nke Nchebe Ịntanetị. Ọ bụ onye nnọchiteanya ECOP na Scotland ma nyere aka mepụta usoro 'Nchebe Onwe M Nchebe' maka obere ụmụaka.
Mo Gill sonyeere anyị Board na 2018. Ọ bụ ọkachamara na-ahụ maka ndị ọkachamara na ndị ọrụ HR, ọkachamara na Ọzụzụ Nhazi, Onye na-ahụ maka ọrụ, Onye Mgbasa Ozi, na Onye Nchịkwa nwere ihe karịrị afọ 30 nke ndị na-emepe emepe, ìgwè na ndị mmadụ n'otu n'otu. Enwere m ọrụ na ọha na eze, ndị mmadụ onwe ha na ndị nwere afọ ofufo n'ọtụtụ ọrụ siri ike nke kwadoro nke ọma na ọrụ nke Ụgwọ Ọrụ.
Anyị anaghị enye ọgwụgwọ. Anyị na-eme ndị ọrụ ntinye aka na-eme.
Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ adịghị enye ndụmọdụ gbasara iwu.
Onyinye wardgwọ Ọrụ na-arụ ọrụ na: